In meeraha laga dhigo mid cagaaran markale si loola dagaallamo isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Isbedelka Cimilada, Ciencia, Kala bixid
Isbedelka cimilada ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee maanta na haysata mustaqbalka. Tikniyoolajiyad aad u tiro badan ayaa la soo saaray oo awood u leh raadinta xalka ama beddelka isbeddelkan saameeya meeraha oo dhan.
Waan ognahay in doorka flora iyo fauna inuu yahay muhiimadda mustaqbalka. Joogtaynta kala duwanaanshaha noolaha iyo jabinta silsiladaha cuntada iyo wareegyada bayoolojiga waa hub wanaagsan oo lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada. Saynisyahannadu waxay baranayaan farsamooyin indho-indheyn cusub oo u oggolaanaya doorka dhirta iyo xayawaanka si loo sii ogaado.
Josep Penuelas waa aqoon yahan ku xeel dheer cilmiga bey'ada aduunka, dhirta dhirta, dareenka durugsan iyo isdhexgalka biosphere-jawiga wuxuuna u heellan yahay baaritaanka isbeddelka noolaha iyo doorkooda isbedelka cimilada. Waxa uu sheegay in saameynta isbeddelka cimilada ee dhirta iyo xayawaanka ay noqon doonto mid caan ku ah cilmiga cilmiga xoolaha Tani waa, tusaale ahaan, markaad caleemaha ka saarto geedaha xaalufin. Isbedelka cimilada kala duwanaanta heer kulka ayaa aad uga duwan tan caadiga ah. Bisha Oktoobar wali way kuleyl ku filan tahay geedaha inay fasiraan inaysan u baahnayn inay daadiyaan caleemaha weli.
Waxaa lamid ah shimbiraha haajira. Shimbirahaani waxay u haajiraan inay awood u yeeshaan inay dhalaan oo ay ku noolaadaan heerkul wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada kuleylka, waddooyinka soogalootiga waxay beddelaan waqtigooda. Waxyaabaha noocan ah waa u fududahay dadku inay fiirsadaan waana mid ka mid ah waxyaabaha ay haystaan Muhiimad weyn ayey u leedahay shaqeynta nidaamka deegaanka ee meeraha. Adoo sii dheereynaya isbeddeladan dabiiciga ah, beddelka noocyada qaarkood iyo kuwa kale ayaa sababi kara, sidaa darteedna, isbeddelada aagga qaybinta.
Dhakhtarka cilmiga bey'ada wuxuu cadeeyay in daraasadaha la sameeyay lagu ogaan karo in bini aadamka iyo dhirta iyo xayawaankuba ay kajawaabaan isbadalka cimilada hidde ahaan isbeddela aad uga dhakhso badan sidii la filayay. Si kastaba ha noqotee, waa in lagu daraa in isbedelada hidaha ee noolaha ay aad u dhaqso badan tahay sababtoo ah xawaaraha ay ku tarmayaan iyo tirada shaqsiyaadka. Taasi waa sababta ay noolaha si fudud ula qabsadaan saamaynta isbeddelka cimilada maxaa yeelay waxay leeyihiin jiilal badan oo badan waqti aad u yar.
Daraasadihii ay sameeyeen Peñuelas si ay u awoodaan inay ogaadaan sababaha iyo cawaaqibka saameynta isbedelka cimilada ee meeraha, luqadda isgaarsiinta in ay leeyihiin ubaxyada. Daraasadahaani waxay bixin karaan xog muhiim u ah in la ogaado xiriirka flora iyo deegaanka nagu hareeraysan.
Dhirtu waxay isdhaafsadaan gaasas ka badan jawiga sidaan filayno
Dhirtu way iswada xiriiraan, ma hadlaan mana muujiyaan, laakiin waxay is dhaafsadaan boqolaal gaasas oo leh jawiga. Waxa ugu fiican ee loo yaqaan sawir-qaadista ayaa ah inay is-weydaarsadaan ogsijiinta, kaarboon laba ogsaydhka iyo biyaha, Laakiin waxa dadka intiisa badani garanaynin waa inay waliba isdhaafsadaan hydrocarbons, khamriga iyo xaddi badan oo xaydhooyin gaas ah oo soo saaraya hawl bayoolaji ahaan aan caadi ahayn oo muhiim u ah isgaarsiinta midba midka kale.
Intaas waxaa sii dheer, dhirtu ma aha oo kaliya inay wada xiriirto midba midka kale, laakiin sidoo kale waxay la xiriiraan dhirta dhirta, ugaarsadayaasha geedaha dhirta ee doorbida kala-daadashada iniinyadooda siyaabo kala duwan. Sidoo kale waa in lagu daraa in isdhaafsashada gaasaska iyo jawiga ay keeneyso isbadal kiimikada jawiga iyo, sidaas darteed, tayada hawada in aan neefsanno Caadi ahaan, meelaha leh cufnaanta dhirta iyo dhirta, hawada aan neefsaneyno ayaa ka nadiifsan oo caafimaad badan tan iyo markii ay dhuuqeyso qaddar badan oo kaarboon laba ogsaydh ah oo ka soo baxa gubashada shidaalka.
Isbedelka cimilada waxaa xooga saaray gubida shidaalka
Daraasadaha ay samaysay Peñuelas, farsamooyinka durugsan ee fog ayaa lagu dabaqay inay awoodaan inay ka shaqeeyaan heer caalami, heer gobol iyo heer degmo ah. Dareenka fog ayaa loo baahan yahay si loola socdo isbeddeladan.
"Waxa aan xaqiijinay waa inaan leenahay meeraha cagaaran ee sii kordhaya, halkaasoo ay ku yaalliin noolaha cagaaran, waxaanna taas ugu nisbeyneynaa inaan ku bacriminayno meeraha kaarboon laba ogsaydh kaas oo ah cuntada dhirta."
Laakiin dhammaantood ma ahan wax wanaagsan, maadaama, sida uu qabo Peñuelas, waxa walaaca leh ee xaaladdan ay tahay tan keentay xaaladaha saturation. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah dhirtu biyo la'aan ayey u tahay abaaraha sababo la xiriira isbeddelka cimilada, ama waxay la'yihiin nafaqooyin maadaama ay aad u yar yihiin. Markay ugu xun tahay, cunsurka xaddidan ayaa ah iftiin la'aan.
Cawaaqibka kor ku xusan waa in cufnaanta cagaaran ay joojiso firfircoonaanta oo ay nuugto CO2 aan sii deyno sidaa darteedna ay kordhiso saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Si tan loo xaliyo, waa in lagu xisaabtamo inay jirto a Xadka nuugista CO2 ee meeraha iyo in nooca nolosha ee aan caadeysanay la badalo tan iyo, hadii ay sidan ku sii socoto, meeraha ayaa aad u kululaan lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Ka dhigista meeraha mid cagaar ah markale la dagaalanka isbedelka cimilada